Ny Manompo An’Andriamanitra no Fanafodiny! | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Lunda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Maya Mongol Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Ny Manompo An’Andriamanitra no Fanafodiny!
Gaga ny mpisava lalana roa tany Kenya rehefa nandroso tao amin’ny trano iray ka nahita olona kely teo am-pandriana. Tena kely ny vatan’ilay lehilahy ary fohy kely ny tanany. Nitsiky be izy rehefa noresahin’izy ireo taminy ny fampanantenan’Andriamanitra hoe: “Hahavita hianika tendrombohitra toy ny serfa ny malemy tongotra.”—Isaia 35:6.
I Onesmus no anaran’ilay lehilahy, ary efa ho 40 taona izy izao. Vao teraka izy dia efa nisy aretina mahatonga ny taolany ho faran’izay malemy. Vao voadona kely fotsiny izy dia efa mety ho tapaka ny taolany. Tsy misy fanafany ilay aretina, ka nieritreritra i Onesmus fa hanaintaina foana ary tsy ho afa-miala eo ambony seza misy kodiarana.
Nanaiky hianatra Baiboly i Onesmus. Tsy navelan’ny reniny handeha hivory anefa izy, sao maninomaninona any ka vao mainka hijaly. Noraisina feo àry ny fivoriana, ary nihaino izany tao an-tranony i Onesmus. Tapa-kevitra ny hivory anefa izy, rehefa nianatra Baiboly dimy volana, na dia mety hankarary azy aza izany.
Nihanarary tokoa ve i Onesmus rehefa nandeha nivory? Hoy izy: “Hoatran’ny nihena ny fanaintainako nandritra ny fivoriana.” Nihevitra izy fa nihasalama satria lasa nanana fanantenana. Faly ny reniny nahita azy lasa falifaly, ka nanaiky hianatra Baiboly koa. Hoy izy: “Ny manompo an’Andriamanitra no fanafodin-janako!”
Tsy ela i Onesmus dia lasa mpitory. Natao batisa izy tatỳ aoriana, ary mpanampy amin’ny fanompoana izy izao. Te hanao izay rehetra azony atao eo amin’ny fanompoana izy, nefa malemy ny tongony roa sy ny tanany iray. Saika hanao mpisava lalana mpanampy izy nefa nisalasala. Nila olona foana mantsy izy mba hanosika an’ilay sezany. Niresaka tamin’ny mpiara-manompo izy, ary nampanantena izy ireo fa hanampy azy. Nahavita mpisava lalana mpanampy ihany àry i Onesmus.
Te ho mpisava lalana maharitra koa izy tatỳ aoriana, nefa nisalasala indray. Nisy andinin-teny ho an’ny andro tena nampahery azy anefa. Ny Salamo 34:8 ilay izy, izay manao hoe: “Andramo ka jereo fa tsara i Jehovah.” Nisaintsaina an’izany i Onesmus, ka nanapa-kevitra ny ho mpisava lalana maharitra. Mitory inefatra isan-kerinandro izy ary manana mpianatra maromaro mandroso tsara. Nanatrika ny Sekolin’ny Fanompoan’ny Mpisava Lalana izy tamin’ny 2010. Faly be izy fa anisan’ny mpampianatra tao ny iray tamin’ireo rahalahy nitory taminy voalohany.
Efa maty ny ray aman-drenin’i Onesmus, nefa mikarakara azy isan’andro ireo rahalahy sy anabavy eo anivon’ny fiangonana. Mankasitraka ny fitahiana rehetra azony izy, ary efa tsy andriny izay hahatanterahan’ilay teny hoe: “Tsy hisy mponina hilaza hoe: ‘Marary aho.’ ”—Isaia 33:24.
Hizara Hizara Ny Manompo An’Andriamanitra no Fanafodiny!
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Novambra 2013
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Novambra 2013